CIN Khabar बिजुली बाल्ने योजना कार्यान्वयनमा समस्या
बिजुली बाल्ने योजना कार्यान्वयनमा समस्या ८६ प्रतिशत जनसङ्ख्या केन्द्रीय प्रशारण लाइनको पहुँचमा, धेरै बिजुली बाल्ने बागमतिमा, थोरै बाल्ने कर्णालीमा (अडियोसहित)
सीता शर्मा सोमबार, फागुन १०, २०७७, ०४:३४:००
काठमाडौँ । गाउँभरि बिजुलीका पोल ठडिएका छन् । घरसम्म तार पनि तानिएको छ । दिउँसो देख्नेलाई लाग्छ यो गाउँ त झलमल्ल होला ।
तर रोल्पाको गङ्गादेव गाँउपालिकाका वडा नम्बर ५ का स्थानीय अम्बरबहादुर केसी धिपधिपे टुकीको उज्यालोमा अध्यारो छल्न २ दिन लगाएर दाङबाट मट्टितेल लैजानुहुन्छ ।
महिनाभरिलाई पुग्ने मट्टितेल लिन उहाँ प्रत्येक महिना दाङको बजार आउनुहुन्छ । दाङ आउँदा गाडी भाडा मात्र उहाँले १२ सय खर्च गर्नुपर्छ । गाउँमा बिजुली आउँछ भनेर आश गर्दागदै वर्षौँ बित्यो ।
बिजुलीको पोल घर नजिकै आए पनि बिजुली बाल्न भने पाइएको छैन । अम्बर भन्नुहुन्छ, ‘२० हजार खर्च गरेर सोलारबाट बत्ती बाल्न खोजेको त्यसबाट १ घण्टा पनि बत्ती बल्दैन । हामीलाई त धेरै दुख छ, नेताले चुनावपछि हामीलाई बिर्सिए ।’
सरकारी निकायको लापरबाहीका कारण रोल्पाको हामपाल गाउँका झण्डै तीन हजार बासिन्दाको उज्यालोमा बस्ने सपना पूरा भएको छैन । पोल गाडेर घरघरमा मिटर जडान हुदाँ पनि गङ्गादेव गाउँपालिका ५ मा बिजुली जडान हुन सकेको छैन ।
कर्णाली प्रदेशमा २ लाख ९८ हजार ३ सय ६० घरधुरी जनसङ्ख्या छ । केन्द्रीय प्रशारण लाइन जोडिएका विद्युत बाल्ने ग्राहक सङ्ख्या ८५ हजार मात्रै छ ।
जाजरकोटको बारेकोट गाँउपालिका ४ को श्री आधारभुत विद्यालयमा कक्षा ८ मा पढ्ने ममता रोकायालाई राति अबेरसम्म पढ्न मन लाग्छ । तर पढ्ने पो कसरी ? टुकीको उज्यालोले साथ दिएको छैन ।
सोलारबाट बालिएका बत्ती २ घण्टा मात्र बल्छन् । त्यसपछी टुकीकै भरमा पढ्नुपर्छ । बिजुली बत्तीको उज्यालो भइदिएको भए आफूले रातिमा पनि अबेरसम्म बढ्न सक्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
बारेकोट गाउँपालिका वडा न ४ का ५ सय ५० घरमा बिजुली पुगेको छैन । जसले गर्दा गाउँलेहरूले मकै, चामल, तोरी पिस्न पानी घट्ट नै चलाउने गरेका छन् । पानी घट्टमा एक पाथी मकै पिस्न ६ घण्टा कुर्नुपर्ने बाध्यता भएको बारेकोटका स्थानीय हरि गोपाल सिंहले बताउनुभयो ।
गाउँलेलाई पुग्ने बिजुली उत्पादन गर्न पानी भने पर्याप्त छ ।
गाउँलाई विद्युत पुग्ने पानी खोलामा खेर गएको देख्दा बारेकोटका स्थानीयहरूले आफैँ बिजुली उत्पादन गर्ने विचार गरेर २०६५ सालमा ५५ घरधुरीले १०/१० हजार रुपैयाँ सङ्कलन गरी २ किलोवाट बिजुली उत्पादन गरेका थिए ।
तर सरकारी पक्षबाट कुनै सहयोग नभएपपछि त्यसलाई गाउँलेले निरन्तरता दिन सकेनन् ।
यही वर्ष भएको आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार सबैभन्दा धेरै वागमतीमा ९५ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा २७ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा मात्रै विद्युत पहुँच छ ।
रोल्पा र जाजरकोटमा जस्तै कालिकोटका कतिपय ठाउँमा पनि बिजुली छैन । कालीकोटको खाँडाचक्र गाँउपालिकामा पनि अझैँ विद्युत पुगेको छैन । बिजुली नहुँदा समस्या भएको स्थानीय यशोदा विश्वकर्माले बताउनुभयो ।
कालिकोटको सान्नीत्रिवेणी गाँउपालिकामा विद्युत त पुगेको छ तर १ दिन बिराएर २ घण्टामा मात्र आउँछ ।
२ लाख १० हजारभन्दा बढी घरले राष्ट्रिय लाइनबाट पुग्ने बिजुली बाल्न पाएका छैनन् । आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या अन्धकारमा छ तर कति घरमा टुकी बल्छ ? प्रदेश सरकारसँग माग्दा तथ्याङक छैन ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिनाका अनुसार कणर्ाली प्रदेशका ५ जिल्ला जुम्ला हुम्ला, कालिकोट, मुगु र डोल्पा जिल्लामा केन्द्रीय प्रशारण लाइन पुगेको छैन । तर पुगेका जिल्लामा पनि सदरमुकामलाई मात्र सीमित छ ।
प्रदेश नम्बर १, २ गण्डकी, लुम्बिनीको अवस्था झण्डै समान ८५ देखि ८९ प्रतिशतसम्म छ । सुदूरपश्चिमको ३३ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा बिजुली पुगेको छैन ।
प्राधिकरणका अनुसार अहिलेसम्म कुल जनसङ्ख्याको ८६ प्रतिशत जनसङ्ख्या केन्द्रीय प्रशारण लाइनको पहुँचमा छन् भने १४ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युतको पहुँचमा छैनन् ।
राजनीतिक दलहरूले जारी गरेका घोषणापत्रमा बिजुली नपुगेको ठाउँमा पुर्याउने भनिएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको चुनावी घोषणामा ३ वर्षमा प्रत्येक नेपालीको घरमा विद्युत पुग्ने भनेको थियो, पछि सरकारले त्यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा हालेको थियो ।
सरकारको तीन वर्ष त पूरा भयो तर ३० लाखभन्दा बढी जनता अँध्यारोमा नै बस्न बाध्य छन् ।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन १०, २०७७, ०४:३४:००
शर्मा, सामुदायिक सूचना (नेटवर्क) सीआईएनमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
स्थानीय तहलाई कानुनको अभाव
वडा सदस्याहरु जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा
अब उपप्रमुखहरूले प्रमुखका लागि दावी गर्ने
गाउँ फर्केकाहरुबाट कोरोना सर्ने चिन्ता
४२ स्थानीय तहमा गाभिने र छुट्टिने बारे बहस
समन्वय समितिका पदाधिकारी भूमिका खोज्दै
कोरोनाका कारण उद्योगी, व्यवसायी समस्यामा
काभ्रे क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद गङ्गाबहादुर दोङले तेमाल गाउँपालिका र वडा नम्बर ६ का अध्यक्षसँग समन्वय गरी स्वास्थ्य शिविर चलाउने मिति तोक्ने सीआईएनसँग बताउनुभयो । १६ घण्टा
ठूलो पर्सेलको जनसङ्ख्या ४५ सय ७७ छ । वारि डाँडा र पारि डाँडामा विभाजित बिभिन्न गाउँमध्ये ‘कामी गाउँ’ मा करिब ३५ घरधुरीका नागरिक बस्छन् । १९ घण्टा
ना ६ ख २७५७ नम्बरको रात्री बस कुदु बराहचौक नजिक दुर्घटना हुँदा ५ जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जाजरकोटका डीएसपी मधुकुमार थापाले जानकारी दिनुभयो । आईतबार, मंसिर १२, २०७८